Ihe ngosi nke "La Niña" ga - ejigide ọnọdụ ndị na - anọpụ iche na mbido afọ 2017 | Netwọk Mgbasa Ozi
Ihe ngosi nke "La Niña" ga - ejigide ọnọdụ ndị na - anọpụ iche na mbido afọ 2017
Ihe ohuru nke "Nwa okoro na nwa agbọghọ" ha na-agba okirikiri ma na-eme ihe dịka ọnọdụ ihu igwe dị. Mtù Na-ahụ Maka Ihu Igwe (wa (WMO) adọwo aka ná ntị na a na-atụ anya na ọnọdụ "La Niña" na-anọpụ iche ma ọ bụ nke na-esighị ike n'oge ọkara mbụ nke 2017. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịbụ na ọnọdụ nwere ike gbanwee site na Mee.
Iji mara ihe omume ndị a, WMO dabere na ọmụmụ na okike nke ụdị ndị na-ebu amụma banyere omume ndị a. Mgbe ha nyochachara ha, ha ekwubiala na ihe puru ime bu na gburugburu ebe obibi a na-ejigide ọbụna na ihe ngosi nke "La Niña" bụ 70-85%.
1 The onu nke "La Niña"
2 Okpomọkụ na Pacific
3 Na ọkara nke abụọ nke 2017
The onu nke "La Niña"
Iji kọwaa ihe ọmụma a, anyị na-echeta mgbe dị mkpirikpi ihe “La Niña” bụ. Ihe a na - etolite mgbe usoro dị mma nke Southern Oscillation ruru ogo dị elu ma dịrị ọtụtụ ọnwa.
Mgbe "La Niña" dị, nsogbu ikuku mmiri na-ebelata na mpaghara Oceania, ma na-akpata mmụba ya na ebe okpomọkụ na ebe ọdịda anyanwụ Pacific n'akụkụ ụsọ oké osimiri nke South America na Central America; nke na - eduga na mmụba na nrụgide nrụgide dị n'etiti nsọtụ abụọ nke Equatorial Pacific. Ifufe ahia ahụ na-esiwanye ike, na-eme ka mmiri dị jụụ nke dị n'akụkụ Pacific ga-adịgide n'elu.
Ifufe ndị a na-adịghị ahụkebe na-arụ ọrụ dị egwu n'elu oke osimiri, na-abawanye ọdịiche dị n'oké osimiri n'etiti nsọtụ abụọ nke Equatorial Pacific. Site na nke a, oke osimiri na-ebelata n'ụsọ oke osimiri Colombia, Ecuador, Peru na ugwu Chile ma na-abawanye na Oceania. N'ihi ọdịdị nke mmiri dịtụ oyi na Equator, elu okpomọkụ nke oké osimiri na-ebelata n'okpuru nkezi climatological uru.
Nke a bụ ihe akaebe pụtara ìhè nke ọnụnọ nke La Niña. Agbanyeghị, anomalies kachasị nke kachasị njọ bụ obere karịa nke edere n'oge El Niño. N'oge ihe omume La Niña, mmiri ọkụ dị na Pacific dịpụrụ adịpụ na-etinye uche na mpaghara na-esote Oceania na ọ karịrị mpaghara a ebe igwe ojii na oke mmiri ozuzo na-etolite.
Okpomọkụ na Pacific
N'ime ọkara nke abụọ nke 2016, oke okpomọkụ nke Oke Osimiri Pasifik nọ na njedebe nke ọnụ ụzọ nke na-ekewa ọnọdụ oyi na nnọpụiche. Ugbu a, na mmalite nke afọ 2017, okpomọkụ ndị a na ụfọdụ mpaghara ikuku alaghachila n'ụzọ doro anya na ọkwa na-anọpụ iche, ya mere, mmetụta "La Niña" anaghị eme. Ihe ngosi ndị a na-eme ka ndị na-amụ gbasara ihu igwe na-eche na ọnọdụ ndị a ga-adịgide adịgide n'oge ọkara mbụ nke 2017.
Ihe dị iche na eme na okpomọkụ ụwa bụ na "El Niño" na-eme ka ha bilie na "La Niña" na-eme ka ha daa. Na mgbakwunye, "La Niña" na-abawanye ugboro oke ifufe na oke osimiri Atlantic.
Na ọkara nke abụọ nke 2017
N'ihi na ihe ịtụnanya ndị a anaghị agbanwe agbanwe mgbe niile, a na-eme ụdị nke na-ewepụta ihe mgbanwe dị iche iche nke ihe ndị a dabere. Atụmatụ ndị a nke ụdị WMO mere maka mgbe Mee 2017 gasịrị, gụnyere ọtụtụ ohere. Ọnọdụ oyi nwere ike ịda, na nke ndị "La Niña" na-enye kamakwa ọnọdụ na-anọpụ iche ruo mgbe ọzọ ga - esote usoro "El Niño".
Na ọkara nke abụọ nke 2017, o yikarịrị ka ọnọdụ La Niña ga-aga n'ihu ” na 50% ohere, na-egosi nzukọ, nke na-adọ aka na ntị, na, puru omume "El Niño" nke mebere n'oge nke atọ ma ọ bụ nke anọ nke 2017 "dị mkpa", na-eguzo na gburugburu 35 ma ọ bụ 40%.
Mgba ọkụ "El Niño" na-abụkarị kwa afọ 7. Agbanyeghị, n'ihi mmụba nke mgbanwe ihu igwe, usoro ihe ndị a na-emewanye nke ọma na ugboro ugboro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ihe ngosi nke "La Niña" ga - ejigide ọnọdụ ndị na - anọpụ iche na mbido afọ 2017
Alps nwere ike ida 70% nke snow ha na njedebe nke narị afọ
Mgbanwe ihu igwe nwere mmetụta ka ukwuu karịa ka e cheburu na anụmanụ